Misha semabhizinesi ari kuvhura nzira inoenda kunharaunda dzeCaribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Caribbean » Misha semabhizinesi ari kuvhura nzira inoenda kunharaunda dzeCaribbean
Bhizinesi Kufamba • Caribbean • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Jamaica yakatumidzwa zita rekuti HOME OF COMMUNITY TOURISM neInternational Institute for Peace kuburikidza neKushanya (IIPT) sezvo pano ndipo payakapihwa makore makumi mana apfuura naDiana McIntyre-Pike muridzi / mushandi weThe Astra Country Inn Mandeville ipapo uye mushakabvu Desmond Henry , wekare Director we Tourism. Pamwe chete ivo vakagadzira iyo Countrystyle Nharaunda Yekushanya Network (CCTN) yekuvandudza kutenderera kwenharaunda kunyanya pamhenderekedzo yekumaodzanyemba kweJamaica.
Countrystyle Nharaunda Yekushanya Network yakagashira kwemuno uye kwepasirese kuzivikanwa.
Diana McIntyre-Pike akagamuchira mibairo yakati wandei yechirongwa ichi.
Iwo maVillage seMabhizinesi (VAB) chirongwa chave kuita chirongwa chemazuva mashanu cheEntrepreneurship Hospitality Training munzvimbo dzinoverengeka muJamaica nedunhu reCaribbean.
Mumamwe makore achangopfuura, CCTN yakagadzira isingabatsiri nhengo yenhengo inonzi VILLAGES AS BUSINESSES (VAB) iyo yakagashirwa kwemuno nekunze. Iyo Countrystyle Nharaunda Yekushanya Network inhengo ye World Tourism Network (WTN), uye Diana McIntyre-Pike akagashira mibairo yakati wandei yechirongwa ichi, ichangoburwa iri mugore ra2020 kubva kuWTN ichangoumbwa semumwe wevashandi gumi nevatanhatu vezvekushanya kuzopihwa nyika dzepasi rose. Tourism Magamba Mubayiro, chirongwa chepamusoro chemubairo.
Iwo maVillage seMabhizinesi (VAB) chirongwa chave kuita chirongwa chemazuva mashanu cheEntrepreneurship Yekugamuchira Vaeni munzvimbo dzakasiyana muJamaica uye nzvimbo yeCaribbean iyo ikozvino yakasimbiswa neYunivhesiti yeWest Indies (UWI) Open Campus. Iwo kudzidziswa kunovhara kuvandudzwa kwemunhu, ongororo yezviripo uye zvinogona kuita zviwanikwa, ruzivo rwezvakatipoteredza, kushanya uye kusarudzwa kwechigadzirwa, kuvandudza bhizinesi, chengetedzo uye maprotocol eCOVID. Imwe yemasangano eJamaican Diaspora, Kuita Connections Kushanda UK, yakatsigira VAB uye kushambadzira KUNYANYA KUNYANYA KWEZVINONYANYA KWAZVO semumburera unosvika.
Gare gare Desmond Henry
Iyo Countrystyle Nharaunda Yekushanya Network (CCTN) nguva pfupi yadarika yakafunga kuve neJamaican neCaribbean Diaspora sevashandi vayo vekudyara nekutengesa. Yakagadzira yakasarudzika nharaunda yekushanya homwe inonzi COMFUND ine yepakati Diaspora Board. COMFUND ikozvino yakanyoreswa muUSA uye parizvino iri kupedziswa nenzvimbo yemari kuti ifambise mipiro uye ingangoita mari. Iko kufarira kuCOMFUND kunotsigira chikwereti chemubhadharo wakaderera uye kupa mari yemapurojekiti anokodzera ekuvandudza nharaunda akaunzwa nenhengo dzeMisha seMabhizinesi. Yese yemberi CCTN Nharaunda yeMararamiro Hupenyu Zororo uye Kuratidzwa kunosanganisira mupiro kuCOMFUND.
Kubatana kwave kungopedziswa neCaribbean Diaspora sangano nharembozha yekushandisa inonzi TravelJamii iyo ichavhurwa munaGunyana 2021. Iyo TravelJamii App ichagonesa iyo Global Community kuona zvese zveCaribbean, nekusimudzira kushanya, kushanya kwenharaunda, makuru mabhizimusi, mabhizinesi emuno. , zvinokwezva, zviitiko, chikafu, nhoroondo, zvakasikwa, nhau uye nezvimwe.
Dr. Samuel Lee Hancock, CM anoti:
Svondo 2, 2021 pa 20: 58
Masikati akanaka kubva kuWashington, DC Diana! Ndezvipi zvinoshamisa zveCaribbean uye zvepasirese kufukidzwa kweako "Misha seMabhizinesi" sechikamu che Countrystyle Community Tourism Network (CCTN). Yako isimba rine simba muJamaica uye kuyambuka nyika makumi matatu nenhatu, matunhu, uye kutsamira kweCaribbean. Ndeapi makuru epasirese kusvika uye kufukidza yako yakasarudzika uye nharaunda-yakavakirwa budiriro chikuva.
Ino yave nguva yekukurukura Yedu Yachting Kubatana kweRotarians (IYFR) yeCaribbean neLatin American Fleets chikumbiro chekufukidzwa kwenzvimbo yese yeCaribbean paThe EmeraldPlanet TV. Izvi zvichave zvekutepfenyurwa zuva nezuva zvese munharaunda nemunyika. Yako nharaunda dhizaini ecotourism uye agritourism iri kunyatso kuunza kutaurirana, kunzwisisa, zvekutengeserana, vakadzi uye nharaunda kupa simba, nerunyararo kuyambuka maCaribbean nepasi rese.
Kugovana pano chirongwa chako cheterevhizheni, maShows, uye Podcast yemasangano ako akasarudzika…
(Kana iyo URL isina kukochekedzwa ingoteedzera uye zvakapfuura pawebhusaiti yako. Nakidzwa nerwendo rwako!)
Musoro: "Vakadzi Hutungamiri Huchinja Nharaunda Kuburikidza neEmabhizimusi Dzidzo uye Sustainable Organic Kurima"
Iyo EmeraldPlanet International Foundation © YouTube Chirongwa URL:
Ratidza '1' Musoro: "Kugadzirira Nzira Mberi Yekushanya Kwehupfumi hweVanhu kubva kuJamaica neCaribbean" https://www.youtube.com/watch?v=hHfPMvROzuw
Ratidza '2' Musoro: "Vakadzi Hutungamiri & Bhizimusi Kudzidziswa Kwemagariro Akavakirwa Kumabhizinesi" https://www.youtube.com/watch?v=GmBh80ZLTXY
Ratidza '3' Musoro: "Vakadzi Vakatungamira Organic Bhizinesi Kurima Munharaunda" https://www.youtube.com/watch?v=vXxYeYdh5bI
Ratidza '4' Musoro: "Kuremekedza Indigenous Technology uye Lifestyle"
"Hutungamiri hwevakadzi Huchinja Nharaunda Kuburikidza neEntrepreneurship Dzidzo uye Sustainable Organic Kurima" Podcast: https://open.spotify.com/episode/3AV2XKvJiNzAzN4o6cBUf8?si=fyq35DBOThmwI7P1M0XFbg&nd=1
Vazhinji vanoshuvira zvakanyanya Diana nekuda kweichi chinoshamisa chekutepfenyura midhiya uye zvimwe zvakawanda kuti zvigadzirwe mune ramangwana nezve ako "Misha seMabhizinesi" sechikamu che Countrystyle Community Tourism Network (CCTN) sekubatana pamwe chete tinogadzira Iyo EmeraldPlanet ©.